Mid ka mid ah madaxda caalamka oo ugu baaqay Mr Wenger in uu iska casilo Arsenal – SBC
Mid ka mid ah madaxda caalamka oo ugu baaqay Mr Wenger in uu iska casilo Arsenal
Posted by editor on January 27, 2012 Comments
Madaxda aduunka ayaa dhanka siyaasada oo kaliya mashquul ku aheyn, waxay si weyn isha ugu hayaan arimaha ciyaaraha, sida kubada cagta, Tenis-ka, Basketball-ka iyo noocyo kale taasi oo loo fasarin karo inay isaga dajiyaan culeyska siyaasada ka soo food saara.
Hadaba kooxda Arsenal ee ka dhisan dalka Ingiriiska gaar ahaan galbeedka magaalada London waxay ka mid tahay kooxaha waa weyn ee aduunka ee hadana leh taagaraayaal malaayiin gaaraya kuwaasi oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin magac leh oo dalal kala duwan xukunkooda haya.
Inkastoo aanay si buuxda u shaacin hadana dadka ku dhaw dhaw haweenayda boqorada ka ah dalka UK ayaa laga soo xigtey in ay aad u taageerto kooxda Arsenal, walow la sheego in ay sidoo kale niyada ka jeceshay kooxda West Ham ee ka dhisan bariga London, laakiin qaysriga boqortooyada oo ay ku qaabishay ciyaartoyda Arsenal iyo tababarahooda iyo waliba dhawr mar oo dadka u adeega ay ka codsatey inay daawadato kulamada ciyaareed ee Arsenal iyo natiijada kulamada aanay daawan oo jeceshay inay ogaato waxa ay ku dhamaadeen ayaa dad badan shaki ku abuuray in Queen Elizabeth ay si weyn u taageerto naadiga Arsenal.
Hase yeeshee Ciyaaryahan Cesc Fabregas oo ka mid ahaa ciyaartoy ka tirsan Arsenal oo ay boqorada UK ku martiqaaday qasrigeeda dhawr sano ka hor wuxuu u sheegay Radio laga leeyahay dalka Spain in ay boqoradu u sheegtey inay tahay taageere Arsenal, waxaana warkaasi subixii dambe boga hore ku soo daabacay waregeyska The Sun ee ka soo baxa magaalada London.
Madaxweynaha wadanka Rwanda Paul Kagame oo lagu tiriyo siyaasiyiinta iyo madaxda aduunka sida xooga leh u taageera Arsenal ayaa caro ka muujiyey xaalada haatan nadigu uu ku sugan yahay ee ah in mudo 6 sano ah aanu wax koob ah qaadin, haatana uu cariiri ugu jiro in uu soo baxo ciyaaraha Champion League-ga oo Arsenal 15 sano oo isku xigta ay ka qayb galeysay.
Madaxweyne Kagame oo ka hadlayey guuldaradooyinkii ugu dambeeyey ee la soo darsay kooxda Arsenal ayaa si caro leh uga hadley isagoo waliba bogiisa Twitter-ka ku soo qorey hadalo uu kaga xanaaqsan yahay tababaraha Arsenal Arsene Wenger isagoo hadalkan sheegay markii ay dhamaatey ciyaartii todobaadkan ay yeesheen Arsenal & Manchester United.
“Aad ayaan u taageera Arsenal, laakiin daacadii Wenger wuxuu u baahan yaha in uu maamulo koox kale, Arsenal-na waxay u baahan tahay tababare kale” ayuu ku yiri bogiisa Twitter-ka madaxweyne Kagame.
“Marka koox ama ciyaartoy wanaagsan iyo tababarahu ay guuldareystaan mudo fara badan, waxay tahay in labadooda mid uun labadalo ama xitaa iyaga oo dhan” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Kagame oo ay ka muuqatey in uu aad uga niyad xun yahay guuldarada kooxda sida ba’an uu u taageero.
Taageeranimada Madaxweynaha Rwanda ee Arsenal ayaa ah mid ay aad u og yihiin maamulka Arsenal iyo Tababare Wenger waxaana sanad guuradiisii 50-aad Madaxweyne Kagame sanadkii 2007 uu ka helay qoraal tahniyad ah tababare Arsene Wenger .
Paul Kagame ayaa la qabey malaayiin taageerayaasha Arsenal ka tirsan oo ka xumaaday badalkii uu tababaruhu ku sameeyey ciyaaryahan Alex Oxlade-Chamberlain 10 daqiiqo oo ay ka dhiman tahay ciyaartii Arsenal lagaga badadiyey gurigeeda todobaadkii hore.
Osama Bin Ladin & taageerada Arsenal
Hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida ee geeriyoodey sanadkii hore Osama Bin Ladin ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka mid ah taageerayaasha Arsenal Arsenal sida ay qortey 11-November 2001 BBC-da qaybta English-ka ee dibadaha la hadashay, xiligaasi oo ahaa laba bilood ka dib weeraradii qarax ee magaalooyinka New York & Washington ee 9/11.
Website-ka BBC-da oo soo xiganayey buug laga qorey Osama Bin Ladino oo lagu magacaabo Behind The Mask of Terror oo uu qorey Adam Robinson wuxuu qoraagu ku sheegay in taageeranimada Bin Ladin ee Arsenal ay xitaa ka gaartey in wiilkiisa ugu weyn ilmihiisa uu iibiyey maaliyada Arsenal .
Warbixintu waxay leedahay Bin Ladin waxay ku biday taageeranimada Arsenal xili uu booqasho ku yimid magaalada London sanadihii sagaashameeyadii.
Barakac Obama & West Ham United
Madaxweynaha wadanka Mareykanka Barack Obama inkastoo uu aad uga helo oo waliba ciyaaro kubada Basketball-ka hadana waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay taageerayaasha kooxda West Ham ee ka dhisan England, waxaana arintaasi uu ku cadeeyey xili uu booqasho ku yimid magaalada London ka hor intii aan loo dooran madaxweynaha Mareykanka sanadkii 2008-dii, isagoo xiligaasi ka qayb galey ciyaar kooxdaasi laheyd oo ka tirsaneyd Premier League-ga, sida ay qortey jariirada The Daily Telegraph ee ka soo baxda magaalada London 28-kii Jan.2008.
Nelson Mandela & taageerada Manchester United
Madaxweynihii hore ee dalka South Africa laguna xusuusto la dagaalankiisii midab kala soocii wadankaasi ayaa isagu ka mid ah malaayiinta qof ee taageerayaasha kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska, iyadoo sanad guuradiisii 89-aad hadiyad uu ku saxiin yahay tababaraha kooxda Shayaadiinta cas cas Sir Alex Ferguson la gudoonsiiyey.
Jose Luis Rodriguez Zapatero & taageerenimada Barcelona
Ra’isalwasaarihii ee Spain Jose Luis Rodriguez Zapatero wuxuu ka mid ahaa taageerayaasha Spanish-ka ah ee kooxda Barcelona ee lagu khiyaaso 29% taageerayaasha kooxdaasi ee aduunka, iyadoo Barcelona ay ka dambeyso Real Madrid oo haysta 38% taageerada dadka Spanish-ka
Taageerayaasha Barcelona waxaa kaloo ka mid ahaa baadirigii geeriyoodey ee madhabta Catholic-ga Kirishtaanka Pope John Paul II kaasi oo lahaa xubin sharafeed taageere.
usaamo mooyee inta kale waa gaalo gaalo dhashay